समय अनुभव कुनै पनि aquarist आफ्नो ग्लास घरहरू मा वासस्थान, घोंघे एउटा दुइटा सम्बन्ध प्राप्त। तल मा आक्रमणकारीहरूले को बचा खान, र (केही) सफा ग्लास लजीवालय मार को - एक हात मा, तिनीहरूले उपयोगी हुन थाल्छ। अर्कोतर्फ, दाग गिलास यी नै प्रकार, र कहिले काँही mollusks अधिकांश त जो हरियो रिक्त स्थान नष्ट "एक बस्ट, संग", केही जलीय मरुभूमि मा एक आरामदायक उद्यानलाई बनाउन गुणन। विशेष मन नपराइएको "rybovladeltsev" प्रयोग गर्दछ चिप्लेकिरो melanoma। संग प्रकार गर्न प्राणीहरू को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न भाग्ने वेग? मात्र कि, यो पनि यसलाई तुरुन्तै शत्रु को बाँध्न सुनिनु भनेर जवान बाँच्न जन्म दिन्छ। अन्य प्रजाति यस्तो प्रजनन कुनै फरक र समय जलजीवालय मा घोंघे को हटाउनु एउटा तरिका फेला पार्न अनुमति दिन्छ। तर यो समस्या सामना गर्न आवश्यक छ, शायद, "पूल" को सबै मालिक।
"चिप्लेकिरो" समस्या को कारण
धेरै अवस्थामा, hobbyists आफूलाई पहिलो यी पशुहरू लजीवालय मा podsazhivayut। तर कहिले काँही उनि अन्डा, बिरुवाहरु, एक स्टोरमा किनेको को रूप मा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। तर, जो तरिका वा नस्ल clams, तिनीहरूले बढ्तै कारण तपाईं उनलाई प्रदान गरेको अवस्थाको गर्न गुणन। विशेष कारण अनियमित वा लापरवाह स्पेस तल सफाई मा। प्रशस्त खाना Yielding र अनावश्यक बासिन्दाहरू को proliferation बढावा। त्यसैले तपाईं चयन गर्नु अघि, जलजीवालय चिप्लेकिरो उन्मुक्ति कसरी, उनको घटना र प्रजनन को रोकथाम हैरान गर्न पहिलो हो। यो मात्र होइन "pylesoshenii" तल हुनेछ; मछलीघर नियमित साफ गर्नुपर्छ, र समय फ्रेम मा पानी परिवर्तन भयो। खाना यसको घटाव लागि प्रतीक्षा बिना सतह देखि राम्रो सीधा हटाउन 20-30 मिनेट Uneaten। मछलीघर मा नयाँ बिरुवाहरु replanting दस मिनेट को लागि एक कमजोर पोटासियम Permanganate मा rinsed गर्नुपर्छ अघि - यो सम्भव बिछाउने मार्नेछ।
त्यसैले जलजीवालय मा घोंघे को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी यो धेरै गाह्रो छ र तिनीहरूलाई प्रकार राख्न बासिन्दाहरूले बाँकी, सजिलो तरिका को स्वास्थ्य खतरामा पार्न सक्छ - जनसंख्या नियन्त्रण गर्न। हप्तामा एक ग्लास मा ठूलो नमूनों र साना "निल्न" हटाउन (उनीहरू त्यहाँ माछा हुनेछु) भने, चिप्लेकिरो overpopulation समस्या बस उत्पन्न गर्दैन। मुश्किल भएको वनस्पति मा लुकाउने यो विधि देखि शंख र अन्डा प्राप्त गर्न अति गाह्रो छ र उन्मुक्ति गर्दैन छ।
घोंघे लागि आहारा
यसलाई कम समय खपत, थप, सुरक्षित पूर्ण पर्यावरण र बिल्कुल निःशुल्क तरिका जलजीवालय मा घोंघे को छुटकारा प्राप्त छ। एक सलाद पात, ककडी टुक्रा वा: ट्यांक को तल त्यो यी प्राणीहरूको लागि आकर्षक कुरा राख्नु छ एक केले छाला। को ठहराव व्यक्तिहरूको पर्याप्त नम्बर zapolzet गर्दा, यो हटाइएको र वेवास्ता गरिएको छ। नेट गर्न डाइभिङ मा डाल चारा को सुविधा को लागि, यो सजिलो बाहिर निकाल्न थियो बनाउन। 2-3 दिन को अंतराल मा प्रक्रिया धेरै पटक दोहोरिएको, गरेर, जनसंख्या गैर खतरामा पार्ने संख्या गर्न अस्वीकार गर्नेछ।
घोंघे लागि जाल
केही व्यक्तिहरू भएकोले प्रलोभनलाई स्लाइड संग खाने, र जोगिन सँगी को दुःखी भाग्य पछि, यो एक जलजीवालय मा अतिरिक्त घोंघे को छुटकारा प्राप्त गर्न अझ प्रभावकारी व्याध तरिका जस्तो देखिन्छ। केही कम्पनीहरूले आफ्ना ढोका मात्र भित्र खोलिएका छन् भन्ने तथ्यलाई आधारित तयार बनाएको जाल प्रस्ताव: शंख को चारा को गंध खोजिएका, तर छोड्न पनि "घर" गर्न सक्दैन। विज्ञापन उपकरणहरू लजीवालय को "सांस्कृतिक" बासिन्दाहरूलाई लागि सुरक्षित छ भनेर दाबी, तर आफ्नो मालिक बारम्बार तिनीहरूले व्यवस्थापन पहिले सुस्त परजीवी यस्तो Catfish रूपमा, भित्र पस्नु कि देखेको छ। त्यसैले तिनीहरू घर प्रयोग गर्न रुचाउँछु। प्लास्टिक बोतल को तल देखि पाँच सेन्टिमिटर को कचौरा गहिराई बनेको छ; यसको किनारा vypolzanija कैदी रोक्न क्रममा आन्तरिक बाङ्गो छन्। डिजाइन एक प्वाल तल मा पप छैन अप गरेको छ, तर सजिलो को लागि एक ट्राफिक जाम बाँधिएको छेउमा माउन्ट मुद्दा गर्न खींच। भित्र चारा राख्नु; माछा, पाठ्यक्रम, पासोमा पौडी खेल्न, तर यसलाई बाहिर खींच चाँडै भाग्न।
धेरै जलाशय को "दूषण" संग जलजीवालय मा घोंघे को छुटकारा प्राप्त गर्न आमूल विधिहरू खोज्न हुनेछ। सबै आफ्नो आवेदन मा अस्थायी आवास मा otsazhivayut र माछा, र अन्य जनावर छ त कि, "पूल" सबै जनावर गुमाउने जोखिम सम्बन्धित छन्। यो तेज र बिना थप नतिजा बिजुली प्रयोग गर्न देखिन्छन्। त्यहाँ मात्र घोंघे र पानी ब्याट्री (पनि एकदम 9-भोल्ट) को दोस्रो अन्त जोडिएको छ प्रत्येक जो असहाय तामा तार दुई फरक पक्ष, तीन मिनेट हटाइएका छन् थिए जहाँ ट्यांक, बसोबास मा। परजीवी हत्या गर्दै छन्, र तपाईं मात्र ट्यांक धुन र यसलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूले फर्कन योजना हुनेछ।
रसायन विज्ञान मद्दत
र, र बाली र पशुपालन मा दैनिक जीवन - उनको मानव जीवनको धेरै क्षेत्रमा resorted गर्न। तर यो सधैं यो विज्ञान फल खतरनाक हुन सक्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। कुनै आपत्ति: रासायनिक तरिका, कसरी, मछलीघर मा घोंघे तीब्र र प्रभावकारी छुटकारा प्राप्त गर्न, तर उनि धेरै हानि, र यो जीवन बिताउन अन्य जीवित जीव गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष, सबै भन्दा मार्न घोंघे समावेश तामा zoopreparatov। लेबल यसलाई अन्य सबै "छिमेकी" को लागि हानिरहित छ कि दावी। तर, त्यही झिंगा उपकरण जस्तै हत्या घोंघे भन्दा कुनै खराब छ। र माछा तिनीहरू सबै जीवित प्राणीहरू सञ्चय छ छ भनेर, unprofitable हुनेछ, र उपचार ट्यांक पछि - उसिनेर।
धेरै माछा होल्डरहरू नुन समाधान लागू गर्न सल्लाह छन्। तिनीहरूले घोंघे लागि साँच्चै असह्य। तर धेरै बिरुवाहरु र माछा पनि नराम्ररी नुन गर्न प्रतिक्रिया - तपाईं फेरि जलजीवालय पुन: सुरु सामना गर्न हुनेछ।
जैविक विधि: घोंघे विरुद्ध माछा
सबै अवस्थित विधिहरू सबैभन्दा, प्रभावकारी दयालु र सुरक्षित सुरु-अप किरा को आफ्नो प्राकृतिक शत्रुहरू को वातावरण मा रहनेछ। सायद यो केही बढी समय लाग्न, तर कुनै पनि जलजीवालय पुनः सुरु वा तिनीहरूको पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य जोखिम छैन। तपाईं जलजीवालय मा चिप्लेकिरो बारेमा पनि चिन्तित हुनुहुन्छ भने, घोंघे विरुद्ध लडाई, जसको लागि तिनीहरूले शिकार छन् ती सुम्पिएको हुनुपर्छ। माछा बीचमा यो महामारीले को सबै भन्दा प्रसिद्ध विजेता makropody छ - घोंघे को प्रभुत्व को एक सय लिटर को ट्यांक सफाई एक हप्ता भन्दा कम हुनेछ। बलियो प्रतियोगिहरु makropody tetradonty हुनेछ; तर आफ्नो किसिम नस्ल उच्च aggressiveness छ को रूप मा, बौना सुरु गर्न राम्रो छ। Gourami, Cichlids र Botia घोंघे नियन्त्रणका लागि उपयुक्त र धेरै। एक गिलास घर Catfish चलाउन-antsitrusy मा शंख को अत्यधिक आबादी को रिकभरी जोगिन: सँगै Windows मा बढ्दो संग, तिनीहरूले शैवाल खाने र कावीयार चिप्लेकिरो।
जैविक विधि: घोंघे विरुद्ध clams
तपाईं एउटा सानो जलजीवालय, र शान्ति-मायालु जान्छन् भने केही समस्या आउँदैन। माछा पनि, शंख मार्न पाठ्यक्रम, शिकारीहरु छन्। अक्सर, यो हटाउनु रूपमा प्रयोग गर्न असम्भव हुन्छ जलजीवालय घोंघे प्राकृतिक खूनी प्रयोग - जीवन जोखिम छ (कम से कम - स्वास्थ्य) अनमोल माछा स्टक। ती Tetradon आक्रामक, पनि आफ्नै प्रजाति भित्र। र cichlids राम्रो सानो छिमेकी खान सक्छ। यस मामला मा हेलेना को एक कोमल नाम संग cochlea मदत गर्नेछ। आफ्नो मुख्य आहार अझै अन्य प्रजाति मा समकक्षों छ। सबै पछि शिकारी - - उत्पादन संग nastiganiem समस्या, तिनीहरूले के तिनीहरूले सामान्य भन्दा धेरै छिटो सार्दा छन् दिइएको। हो, र पर्खाइ "लुकेर" मा झूट, तिनीहरूले पनि थाहा कसरी। र पीडित समातिए, हेलेना उसलाई carapace अन्तर्गत नरम भाग मा धक्का, को "मुख" संग proboscis र पराल मार्फत एक ककटेल जस्तै बेकारी - मात्र खाली खोल रहनेछ।
सिकारी घोंघे को गतिविधि मा सीमितता। (- ampulyarii जस्ताको तस्तै रहने, ठूलो अर्कोतर्फ जो) सबै को पहिलो पनि तिनीहरूले नछोऊ ठूलो व्यक्तिहरूलाई छ। हरेक सानो कुरा पनि "ज्यादै कठिन" - हेलेना बस तिनीहरूलाई आफ्नो mouthparts छडी गर्न सक्दैन। र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - हो घोंघे हेलेना महंगा। हामी आफूलाई एक जोडी किन्न बजेट मा फांसी छ छौँ।
त्यसैले हामी, जलजीवालय मा घोंघे को छुटकारा कसरी प्राप्त सबै चलिरहेको प्रक्रियाहरू सूचीबद्ध र तिनीहरूको बलियो पक्ष र कमजोरी औंल्याए भनिएको छ। कसरी चयन गर्न - तपाईं निर्णय!
आधुनिक पशु चिकित्सा क्लिनिक के हो? "भिजेको-स्थिति" - कुनै पनि अवस्थामा र कुनै पनि समय व्यावसायिक मद्दत
र कसरी जलजीवालय मा माछा खुवाउन कति पटक?
राइफल "Dragunov" - घरेलू sniper हतियार एक सिद्ध उदाहरण
विवाहको 15 वर्ष
जीवनी Dmitriya Nagieva: सफलता एउटा लामो बाटो
औषधीय चिया "Helba"। उपयोगी गुण र विधि पेय मदिरा
ब्रेडक्रंब मा Courgettes। व्यञ्जनहरु
पोस्ट - यो के हो? कि सबै भन्दा राम्रो पोस्ट स्तर मा हुन्छ एउटा पोस्ट कसरी लेख्न?